Liverpool Iyo FC Porto Oo Ganaax Kala Kulmay Xidhiidhka Kubadda Cagta Yurub Ee UEFA
HomeWararka CiyaarahaLiverpool iyo FC Porto oo Ganaax kala kulmay Xidhiidhka kubadda cagta Yurub ee UEFA
December 21, 2021 Wararka Ciyaaraha, Champions League 0
Xidhiidhka kubadda cagta Yurub ee UEFA ayaa ganaaxyo kusoo rogay kooxaha Liverpool iyo FC Porto kaddib markii ay jabiyeen sharciga kulankoodii ugu dambeeyey Champions League.
Reds ayaa 2-0 kusoo badisay kulankaas oo dhacay November 24, waxaana goolasha u dhaliyey Thiago Alcantara iyo Mohamed Salah, hase yeeshee taageereyaasha labada kooxood ayaa markii ay ciyaaartu dhamaatay waxay sameeyeen fal sababay in UEFA ay ganaaxyo ku riddo Liverpool iyo FC Porto.
Tiro taageereyaal ah oo u badnaa carruur da’ayar ah ayaa markii ay ciyaartu dhamaatay orod kusoo galay garoonka, waxaanay ku heleen laynka Andy Robertson oo haystay kubaddii lagu ciyaarayay, taas oo ku qasabtay difaaca bidix inuu kubadda siiyo mid ka mid ah jamaahiirta soo gashay garoonka.
Carruurtan da’yarta ah ee garoonka soo gashay ayaa is-eryanayay iyadoo uu midkood gacanta ku sitay calaamadda Liverpool, waxaana dibedda u saaray ciidamada amaanka ee ku sugnaa garoonka.
Guddida Anshaxaha ee xidhiidhka kubadda cagta Yurub ee UEFA ayaa sheegay in labada kooxood ay lumiyeen hab-dhaqanka suubban iyo inay taageereyaashooda ka xakameeyaan garoonka, waxaana lagu riday ganaaxyo lacageed.
Liverpool ayaa lagu ganaaxay inay bixiso €5,000 Euro, laakiin FC Porto ayaa uu ganaaxeedu culus yahay, waxaana lagu riday €45,000 Euro maadaama ay taageereyaasheeda u badnaayeen kuwii garoonka rabshadda ka sameeyey. Arrinta kale ee sii culaysay ganaaxa FC Porto ayaa waxa uu xidhiidhka kubadda cagta Yurub ee UEFA uu ku sheegay inay kooxdu xilli dambe soo gashay garoonka oo ay ka habsaantay waqtigii loogu talo galay.